Iskena seBarcode, Umshicileli weRisithi yeThermal, uMtshini wePOS - iMinjie
ISikena seBhakhowudi yeQonga
Ekubeni iimveliso zethu zihlala ekusebenzeni okuthembekileyo kunye nexabiso elifanelekileyo, sinesiseko esikhulu kunye nesanelisekile sabathengi, njengeWalmart, iBhanki yaseChina, iBhanki yeKookMin, iDriveline Retail kunye nokunye.
Umboniso weHK (2)
uvavanyo lokuma lwesiskena sebhakhowudi
Uvavanyo lokuguga lwe-POS
IMinjie Technology Co., Ltdyasekwa e-Shenzhen ngo-2009, yaza yafuduselwa e-Huizhou Guangdong ngo-2011. Singabantu abachwephesha abachwepheshile be-barcode scanner, umshicileli we-thermal kunye nomvelisi we-POS yethebhulethi yonke.Inkampani yethu ikhethekileyo kuphuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yokuchonga iimveliso ezizenzekelayo. Iimveliso zethu eziphambili zineentambo zebhakhowudi zokuskena, i-omnidirectional desktop scanners, iimodyuli ze-injini yokuskena, abashicileli bebhakhowudi ileyibhile, umshicileli werisithi ye-thermal, zonke-in-one tablet POS. njl...
umkhondo wethu iinkokeli ingcamango iimveliso
INGCACISO, UKUSEBENZA, NOKUTHEMBEKA
Kuba iimveliso zethu zihlala zisebenza ngokuthembekileyo kunye nexabiso elifanelekileyo , sinesiseko esikhulu kwaye sanelisekile sabathengi .njengeWalmart.IBhanki yaseTshayina .Kookmin Bank Driveline Retail kunye nokunye.
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Iskena seBhakhowudi esibambe ngesandla, Iskena seBhakhowudi esitshiphu, Iskena seBhakhowudi yaseTshayina, Qr Code Reader Barcode Scanner, Iskena seBhakhowudi yeQr, Iskena seBhakhowudi, Zonke iimveliso